Taageeridda Bulshada Rohingya
29-kii Maarso, Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga, ee UNHCR, wayaa bilawday Qorshaha Kajawaabista Wadajirka ah 2022-ka ee Qalalaasaha Bini'aadantinimo ee Rohingya.
Qaramada Midoobay ayaa raadinaysa in ka badan 881 milyan oo doolar oo deeq ah si ay u taageerto ilaa 1.4 milyan oo qaxoonti Rohingya ah oo ku nool xeryaha bariga Bangladesh.
Danjiraha Mareykanka ee Bangladesh Peter Haas, ayaa 29-ki Marso ku dhawaaqay, in Mareykanka uu gaarsiin doono lacag gaareysa 152 milyan oo dollar oo gargaar bani’aadannimo oo dheeraad ah, kuwa ku sugna Bangladesh, Burma, iyo meelaha kale ee gobolka. Dadkaas oo uu saameeyay xasuuqa iyo danbiyada kale ee ka dhanka ah bani’aadannimada ee ay ku kaceen millatariga Burma. Sidaasi waxaa sheegay Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price.
Tan iyo bishii August ee sannadki 2017, markaas oo ay dad ka badan 740,000 oo kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya lagu qasbay in ay u cararaan si ay ugu nabad-galaan Cox’s Bazar ee dalka Bangladesh, Dowladda Mareykanka ayaa bixisay gargaar bani’aadannimo oo jawaab deg deg ahaa oo gaarayay 1.7 bilyan oo dollar, lacagtaasi waxaa ku jirtay 152 milyan oo dollar oo dhawaan lagu dhawaaqay.
In ka badan 125 milyan oo doolar oo lacagtan u dambaysay ah ayaa loogu talagalay barnaamijyo gaar u ah qaxootiga ku sugan Bangladesh. Qaar ka mid ah lacagta ayaa ka caawin doonta hey’adaha gargaarka bixiya ee aan bahwadaagta nahay inay bixiyaan gargaar naf-badbaadin ah oo loogu tala galay in ka badan 920,000 oo ka mid ah qaxootiga Rohingya ee Bangladesh.
Waxa kale oo ay taageero siin doontaa in ka badan 540,000 oo xubnood oo ka tirsan bulshada martida loo yahay ee Bangladesh kuwaas oo ay saamaysay dhibaatadu.
Qeyb ka mid ah lacagtaas ayaa lagu bixi doonaa sidii qoysaska loo siin lahaa cunto, gargaar caafimaad, biyo nadiif ah iyo fayo-dhowr si looga hortago in cudurradu ay faafaan. Waxay taageeri doontaa ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo fayoqabka qaxootiga Rohingya, waxay gacan ka geysan doontaa xoojinta u diyaargarowga musiibada, waxay sidoo kale ka caawin doontaa la dagaallanka saameynta isbeddelka cimilada.
Sidoo kale, waxaan fahamsanahay in waxbarashada iyo waxqabadka dakhli-abuurka ay ka mid yihiin hababka ugu waxtarka badan, si loo abuuro xeryo qaxooti oo ammaan oo ku yaalla Bangladesh. Tani waa mid ka mid ah sababaha qaar ka mid ah lacagahani loogu weeciyay xaqiijinta in carruurta iyo dhallinyaradu ay helaan waxbarasho iyo tababarro xirfadeed.
“Dowladda Mareykanka waxay aqoonsantahay in Bangladesh iyo shacabkeedu ay qaadeen masuuliyad aad u weyn si ay u martigeliyaan qaxootiga,” ayuu yiri Afhayeen Price.
Wuxuu intaasi raaciyay “Waxaanu la shaqeyneynaa Dowladda Bangladesh, dadka Rohingya, iyo qowmiyadaha kale ee Burma si loo helo xalka dhibaatadani, oo ay ku jiraan amni, iskaa-wax-u-qabso, Sharaf, dib u laabasho iyo is-dhaxgal waarta oo ay sameeyaan qaxootiga Rohingya iyo dadka kale ee gudaha ku barakacay, marka ay xaaladaha Burma innoo saamaxaan.”